အနောက်ကင်မရာငါးလုံးနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ နိုကီရာဖုန်းအသစ် – Myanmar Mobile App
Posted on February 18, 2018 Author myanmarmobileapp
Android Pez? Pie? Popsicle? ဘယ်လိုပဲတွေဖြစ်လာမလဲ P တစ်လုံးတည်းနဲ့ ခန့်မှန်းရတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ Android ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကစမတ်ဖုန်းအများစုမှာ အသုံးပြုနေကြတာပါ။ Google ဟာ လူသုံးများနေတဲ့ OS ကို tip-top ပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာတော့မကောင်းပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဟန်းဆက်မှာ နောက်ဆုံးဗားရှင်းရနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ အတော်လေးကြာဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ရောက်လာမှာမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးဗားရှင်းကလည်း မကြာခင်မှာ ရောက်လာတော့မှာပါ။ Android 9.0 P အကြောင်းကလည်း အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။ သွားရည်စာနာမည်လေးတွေနဲ့ Google က တစ်ချိန်လုံးဖမ်းစားထားတာပါ။ ဒီတော့ ဘာနာမည်တွေ ဖြစ်လာမလဲ။ ဘယ်လို feature တွေကို Android 9.0 မှာ Google က ထည့်ပေးထားမလဲ။ သိလိုသမျှအရာတွေကို သိသမျှတင်ပြထားပါတယ်။ Android […]